Ibhinqa le shishini
Kwiminyaka emininzi, abafazi babecingelwa njengezesondo ezibuthathaka. Ukwenza imisebenzi yasekhaya kunye nokukhulisa abantwana ngumsebenzi oyintloko kuthi. Oku kwacatshangelwa kwada kwaqala ekuqaleni kwenkulungwane yokugqibela, kodwa namhlanje imeko iguqukile kakhulu. Abameli abaninzi banamhlanje banobuchule obufanelekileyo bazama ukuphumelela kwishishini kunye nezopolitiko-amasebe ahlala esicatshulwa ngokugqithiseleyo njengamadoda.
Kwizixeko ezinkulu, akukho mntu uyamangaliswa ngumfazi oshishino. Ngokuqhelekileyo nakwiinkampani ezinkulu, izikhundla eziphambili zihlala ngabasetyhini. Isibhengezo kunye nesibonelelo seshishini sabasetyhini sinokufumaneka rhoqo kwiibhodi zentengiso yee-arhente zokuqesha. Ngaphezu koko, ishishini labasetyhini liye lasakazeka kangangokuba, ukususela kwiminyaka elishumi elinesibhozo, amantombazana amaninzi afuna impendulo kumbuzo wendlela yokuba ngumfazi oshishino ophumelelayo, ekubeni ngaphandle kokuzimela kwento yonke ibhinqa lorhwebo linethuba lokuphuhlisa nokukhula kwezobugcisa.
Umfanekiso womfazi weshishini uyamkelwa ngabaninzi. Emva kwakho konke, nangona kulingana namadoda, ibhinqa le shishini alikhululwa kwindalo yakhe yemvelo - ukuba ibe ngumfazi nonina. Umfazi weshishini unokukwazi ukudibanisa le miba emibini. Ukuze uphumelele kwaye wenze isitayela sakho, umfazi weshishini kufuneka alandele imithetho ethile:
kwiingubo zokukhetha ukhetho lweshishini;
Ungagqoki izicathulo eziphezulu kunye neengxowa;
ayinamathelwano kwizinto ezintsha zentengiso. Izinto ezihamba phambili zikulungele ukuphumla, kodwa ukuba zisebenze eofisini, kwaye ingxoxo yezoshishino akufanele igugile;
Musa ukugqoka iimpahla ezingenanto. Ingubo emfutshane okanye i-decolleté ejulile kuqala ibangalisa ingqwalasela yakho, kwaye ingabi ngamakhono engqondo;
Musa ukusela utywala oluninzi kwiziganeko ezisemthethweni;
ukugqoka i-pantyhose kuphela yimibala enemibala;
Ungaphenduli iofisi yakho ibe yile salon, uhambe etafileni isikhonkwane se-polish, i-comb, i-lipstick.
Le mithetho iya kuba luncedo kunoma yimuphi umfazi ofuna ukuphumelela kwishishini. Kuyaziwa ukuba iimpawu zoshishino zomntu zidlala indima ebalulekileyo ekukhuleni komsebenzi. Umfanekiselo wesifazane weshishini awakhiwe kuphela kwindlela ekubonakala ngayo. Ewe, ukukwazi ukugqoka kakuhle, ukuthatha izixhobo kunye nokuzijonga kubaluleke kakhulu. Nangona kunjalo, ingqwalasela enkulu kufuneka ihlawulwe kwiimpawu ezifana nokugcina ixesha, ukunyanzeliswa kwengcinezelo, uxanduva kunye nokuzinikela. I-Etiquette kunye nesicatshulwa somfazi weshishini. Nantsi imigaqo yayo eyintloko:
ukukwazi ukukhetha ingubo efanelekileyo kunoma yimuphi umcimbi;
ngokuchanekileyo nangokucacileyo iingcinga zabo, ungasebenzisi ulwimi oluhlazo;
soloko esilumkisa malunga namaqabane amashishini asekupheleni;
ukuba neendlela ezilungileyo;
nithi ubabalo ngesandla;
Kwindoda yeshishini leshishini, ngaphezu kweenzuzo ezininzi, kukho intsalela. Okokuqala, amaninzi amabhinqa amabhinqa anexesha elincinci lobomi bomntu kunye nosapho. Amaninzi amabhinqa amabhinqa akanabantwana de kube neminyaka engamashumi amathathu anesihlanu, azinikezela emsebenzini.
Okwesibini, abafazi bahlala bebingelela impilo yabo yezoshishino. Ukuhlala eofisini, iiyure ezingaphezu kweeyure, ukuhamba kwezoshishino, uxinzelelo - konke oku kungafanelekanga kakhulu kwintlalo.
Okwesithathu, umfazi ophumelelayo kwaye ozuza kakuhle kunzima ukufumana umlingane womphefumlo. Iingcali zenzululwazi ziye zazisa ukuba emva kwelo bhinqa lelo shishini, amadoda amaninzi azive ekhululekile. Enye yemisebenzi ephambili yowesifazane oshishino ophumelelayo kukufumana "intsingiselo yegolide" phakathi kwezoshishino nobomi bomntu. Emva koko uza kukwazi ukufezekisa kunye nokuvuya.
Umsebenzi ngebhedi - ngumdlalo owufanele ikhandlela?
Usuku olusebenzayo olungavumelekanga
Indlela yokuvula ikhenkethi yehlobo
Indlela yokuba ngumfazi ocebileyo onempumelelo?
Yintoni oyenzayo kummiselo?
Ibhizinisi lasekhaya kwabasetyhini - iingcinga kunye neengcebiso
Indlela yokuphumelela ebomini?
Indlela yokujoyina iqela elitsha?
10 lifjhak, eya kwenza lula ubomi bakho
Ibhizinisi leentyatyambo - apho uqala khona?
Iimpembelelo zokudubula isithombe
"Decis" - imiyalelo yokusetyenziswa
I-Pizza 4 ieshizi - iresiphi
Indoda yesiganeko, ibhinqa le-Dragon - ukuhambelana
Iziyobisi ngenxa yokubanda ngexesha lokukhulelwa
Ungayibamba njani intshontsho entloko yakho?
Ukuxhamla kwezinto ezinobulunga
I-Refrigerant - recipe
Ziziphi iilensi ezingcono - olunye usuku okanye ngenyanga?
U-Kristen Stewart uphinda ubonisa izibilini emadolweni akhe
Xa kutyalwa iidiliya - entwasahlobo okanye ekwindla?
I-Kvass evela kwibhasley - iresiphi
Indlela yokugqiba iqondo lokunyanyela?
Usuku lweengelosi Igor
Ukutya kwe-Lemon - I-TOP-3 yokutya okusemgangathweni yokulahleka kwesisindo kunye nemon
USarah Jessica Parker: "Ukuba ngumama kunye neenkwenkwezi ngexesha elifanayo kulula!"
Ukutyunjwa kwempahla ngeglasi ephukile 2016